Morning Update: Filimka Ittefaq oo si hoose ku furmay waxaa ka bilaabasho wanaagsan Thor – Filimside.net
Morning Update: Filimka Ittefaq oo si hoose ku furmay waxaa ka bilaabasho wanaagsan Thor
November 3, 2017 Zakarie Abdi
Taariikhda: November 3, 2017
Sidharth Malhotra, Sonaskhi Sinha iyo Akshaye Khanna filimkooda Ittefaq ayaa ku furmay si hoose oo ah 10% ilaa 15% sida shabakada Boxoffice India soo daabacday.
Filimka Hollywood-ka ah Thor – Ragnorak ayaa ku furmay 25% ilaa 30% subaxdii hore xiliga Hindiya asigoo labo laab ka bilaabasho wanaagsan Ittefaq.
Ittefaq bilaabasho ahaan wuxuu la yimid Sidharth Malhotra filimkiisii ugu dambeeyay A Gentleman kaasi oo Disaster noqday laakiin Ittefaq ayaa rajo wanaagsan madaama A Gentleman tiyaataro aad u badan la saaray miisaniyadiisa aad u badneynd.
Ittefaq wuxuu heestaa fursad uu sare u kac ku sameyn karo maanta gelinka dambe iyo maal maha sabti iyo axad hadii sheekadiisa laga helo.
Waxa ugu weyn ee Ittefaq caawin karo inuu ganacsi ahaan bad baado ayaa ah in filimkan 13 Crore ilaa 14 Crore lagu qarash gareeyay waxayna qaateen kooxda iska leh siyaasad wanaagsan oo ah inaay wax xayeysiin iyo buun buunis loo sameynin filimkaan taasi oo qarashaadkiisa sare u qaadi laheyd.
Madaama Ittefaq lacag yar lagu sameeyay waa qasab inuu dib usoo celiyo weliba hadii sheekadiisa laga helo waa hubaal inuu guul weyn gaari karo sidoo kalena markaas ayay amaan heli karaan kooxda filimkaan sameesay, balse ceeb weyn ayaa ku dhici doono hadii filim 14 Crore kaliya xambaarsan bad baadin waayaan!
Dhinaca kale filimka Hollywood-ka ah Thor – Ragnorak ayaa la filaa inuu maalintiisa kowaad ganacsi adag sameeyo madaama si wacan uu ku furmay xitaa wuxuu ka bilaabasho wanaagsan yahay qaybtiisii kowaad Thor oo maalinta kowaad gudaha Hindiya ka keenay 2.25 Crore.
Sababta Thor – Ragnorak si wacan ugu furmay ayaa ah doorka Hulk ee mashruucaan lagu soo daray kaasi oo gudaha Hindiya aad looga jecel yahay.
Waxaa Aqrisay 879
cabdulaahi Yusuf says:
sxb ZAKI siduu ku noqon karaa hit iyo super hit